ต้องการขาย ที่ดินเปล่าแปลงสวย ม.เทพธานี (ซ.2) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซ.62 แยก6| DDHomeLand
ต้องการขาย ที่ดินเปล่าแปลงสวย ม.เทพธานี (ซ.2) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซ.62 แยก 6
ที่ดินเปล่า ม.เทพธานี (ซ.2) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซ.62 แยก6ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ดินแปลงสวย บรรยากาศธรรมชาติ ในลำเลที่สะดวกในการเดินทาง ใกล้ห้างคาร์ฟูร์ สวนหลวงร.9 การคมนาคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลชน อยู่ใกล้ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ประมาณ4กิโลเมตร ห้างคาร์ฟูร์ ประมาณ3กิโลเมตร (เสนอขายตารางวา 25,000 บาท)
รหัสทรัพย์สิน : LB02 - 012757
ประเภทบ้าน : ที่ดินเปล่า
ลักษณะบ้าน : -
เนื้อที่ : 122 ตร.ว.
ต้องการ: ขาย ราคา: 3,050,000
คำค้น: ขายที่ดิน. ม. เทพธานี | ขายที่ดิน เทพธานี | မြင့်​မြတ်​​အေားကား | မိန်းမတို့အ​ကြောင်း | အောစာအုပ်စင်း2 | မြန်မာ zatkar | မြန်မာ အောစာအုပ်စင် | အောစာအုပ်စင် | မြန်မာ မိုးဟေကို လိုးကား | မြန်မာ ၂၀၁၅ အောကား လိုးကား |
မိန်မများ မိုးပြည့်ပြည့်မောင် အေားကား ဖီလင် မမ ဂျန်​ပန်​​အေားကား အောစာအုပ်﻿ ကာမရသ ဖီလင် မမ မိုးပြည့်ပြည့်မောင် အေားကား ဂျန်​ပန်​​အေားကား အောစာအုပ်﻿ ကာမရသ ​မောင်​နှမ ကာမ ဖင် လှန် မိုးဟေကို အော်ကား ကာမအလှူ လိုးကား ကာမအလှူ လိုးကား ကာမအလှူ လိုးကား ​မောင်​နှမ ကာမ ဖင် လှန် မိုးဟေကို အော်ကား ကာမအလှူ လိုးကား ကာမအလှူ လိုးကား ကာမအလှူ လိုးကား စိုးမြတ်သူဇာ လိုးကား ဖို+မ အိချောပို精彩在沃 မြန်မာ အောရုပ်ပြ စောက်Google အပြာကားများ စုစည်းမှု ဖို+မ အိချောပို精彩在沃 စိုးမြတ်သူဇာ လိုးကား မြန်မာ အောရုပ်ပြ စောက်Google အပြာကားများ စုစည်းမှု ဂျန်​ပန်​ ​လိုး& ​ဆောက်​ဖုတ်​​ဖွေး​ဖွေး မိုး​ဟေကို ဂျန်​ပန်​ ​လိုး& ​ဆောက်​ဖုတ်​​ဖွေး​ဖွေး မိုး​ဟေကို বাংলাদেশি কাকিকে চোদার চটি গল্পের তালিকা
process: 0.0095 sec. :: memory: 1.33 MB